We Fight We Win. -- " More than Media ": အမေရိကန် က ဖမ်း ခိုင်း လို့ ဂျပန် က မြောက်ကိုးရီးယားသဘောင်္ကိုဖမ်း
အမေရိကန် က ဖမ်း ခိုင်း လို့ ဂျပန် က မြောက်ကိုးရီးယားသဘောင်္ကိုဖမ်း
နိင်ဝင်ဘာ ၂၄ ရက်ထုတ် အဆာဟိရှင်ဘွန်းသတင်းစာအရ
မြန်မာနိုင်ငံ သို့တင်ပို့မည့် အဏုမြုစွမ်းအင်ထုတ်အဆင့်ရှိ
စက်ပစ္စည်းဟုယူဆရသော သတ္ထုပိုက်အချောင်း ၅၀ နှင့် အရေအသွေးမြင့် အလူမီနီယံ.
သတ္ထုစပ် အတုံးများကို အမေရိကန်အစိုးရ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့်.
ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်က တိုကျိုဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော.
ဝမ်ဟိုင်သင်္ဘောပေါ်တွင် ဂျပန်အာဏာပိုင်တို့က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး.
ထိုပစ္စည်းများမှာ ရန်ကုန်အချေစိုက် စိုးမင်းထိုက် ကုမ္ပဏီသို့ ပို့ရန်ဖြစ်ပြီး.
စိုးမင်းထိုက်ကုမဏီ ဟာ ၀ နာမည်ခံထားပြီး တရုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမဏီဟုသိရပါတယ်
ယခင်ထောက်လှမ်းရေးမှုး ဟောင် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းနှင့်နီးစပ်သူများပတ်သက်နေတယ်ဟု